Fitakian’ ny mpampianatra : Vola 155 miliara Ar no navoaka -
AccueilRaharaham-pirenenaFitakian’ ny mpampianatra : Vola 155 miliara Ar no navoaka
Fitakian’ ny mpampianatra : Vola 155 miliara Ar no navoaka
10/07/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Vola mitentina 155 lavitrisa Ariary anatin’ ny kitam-bolam-panjakana no efa navoaka hamaliana ny fitakian’ ny mpampianatra , dia mbola manohy hatrany ny fitakiany ihany izy ireo ary hita izany omaly tetsy Antanimbarinandriana. Mazava ny nambaran’ ny praiminisitra lehiben’ ny governemanta omaly nandritra ny nanatanterahany ny fanambaram-pananana tetsy Ambohidahy, fa “efa nisy ny dinika sy ny zavatra nekena mikasika ny fangatahan’ ny mpampianatra, ary vola tsy toko tsy forohana no navoaka tamin’ izany , izay nentina nanomezana ny (reclassement, avancement) , tambin-karama ny volana oktobra, ka tokony ho sahy hijoro hanambara izany izy ireo “ hoy ny praiminisitra lehiben’ ny governemanta. Noho izany dia sahy nilaza mazava ny praiminisitra lehiben’ ny governemanta Ntsay Christian fa “efa misy ny zavatra nekena dia mbola raisina ho sorona hatrany ny zanaka malagasy, tokony ho samy hijoro ho tompon’andraikitra ny mpitondra sendikaly hiteny hoe izao no efa azo dia ekena izany, ary tokony ho sahy hijoro hoe efa misy ny azo tamin’ny fangatahana ka miverina mampianatra” hoy hatrany ny praiminisitra tamin’ ny feo hentitra.
Raha ny fanazavana izay nentin’ ny praiminisitra hatrany dia misy ny fangatahana izay efa novaliana, ary izany dia nisy ny ezaka izay notontosain’ ny fitondram-panjakana mba hitsinjovana ny rehetra, io ilay hoe dinika sosialy. Efa nisy hoy izy ny fanombohana tamin’ ireo resaka mikasika fijerena ny olan’ny sendika, ary ny resaka atao dia misy fiatombohany ary misy fiafarany. “Ny resaka atao tsy maintsy misy fanombohana sy fahataperana, ary tsy afaka hifandinika iray volana sy roa volana”. Hatreto izany aloha na misy aza io vola izay navoakan’ ny fitondram-panjakana io dia mbola tsy rototra amin’ ny hanajanonana ny fitokonana ireo mpampinatra. Ankilany anefa dia nahenoana resaka ihany ireo mpampianatra sasany amin’ ny ady varotra amin’ ny fitakiana ny fanemorana ny fanadinam-panjakana. Noho izany raha mbola misy ny fitokonana dia mizaka ny tsy eran’ ny aina hatrany ireo mpianatra malagasy sy ny ray aman-dreny amin’ny fisiana na tsia ny fanadinam-panjakana.
Tatitry ny FMI : Nihatsara ny tontolon’ny toekarena eto Madagasikara
“Prefet”-n’ny polisy Ravelonarivo Angelo Christian : “Handraisana fepetra ireo mpanao fihetsiketsehana tsy nahazo alalana”